Bato muParis: nzvimbo dzakanakisa | Absolut Kufamba
Bato muParis: nzvimbo dzakanakisa
Alberto Makumbo | | France
Kuenda kuguta rerudo kwakachena kufunga, kunakidza, kudanana uyezve nzvimbo yekutora tsika sedzedu sekubuda nedoro hazvisi nyore nguva dzose. Mushure memakore matatu muParis kutendeuka kwese kutsvaga tsvimbo yakachipa yakakwana kuita dambudziko nyowani, izvi zvakanakisa nzvimbo dzekuenda kuParis uve unokurudzirwa zvakanyanya kana uchitora mukana weakakurumbira nguva inofadza uye unakirwe nemhepo yakanaka.
2 ChiLatin Quarter
6 Iyo Butte aux Cailles
Mukati memwoyo weParis, iyo yekutanga arrondissement inotangira paChatêlet-des-Halles chiteshi uye inotambanuka kuenda kumahombekombe eSeine, ichiratidza zviuru zvemabhawa, materu uye zvimwe zvitoro kwaunowana doro rakachipa kutanga na1 masikati inova imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuenda kudoro muParis. Bhawa senge Dupont kana Blok (rue Duc de Lombards, ine mapendi asingasviki matatu euros), kana mhepo yeLe Beho, munzvimbo Sainte-Mukana, ndiwo mamwe akanyanya kukurudzirwa. Kusarudza kuenderera mberi uchienda kunharaunda yeLe Marais kana kuva nedoro shoma mumhepo paPeace George Pompidou ndedzimwe zvirongwa zvinokurudzirwa. Kana zvasvika pakutamba pakupera kwehusiku, hapana zvirinani kupfuura Café Oz, iri rue Saint Denis.
Kana tikabva kuChâtelet tikaramba tichienda kune yakakurumbira Île-de-la-Cité uye ndokusvetukira kune rimwe divi reSeine, isu tichawana imwe yemagariro eparadhiso yeguta: Latin Quarter, nharaunda inowanikwa La Sorbonne iwo mazana ezvitoro zvechipiri-zvemaoko uye zvimwe zvengano senge Shakespeare & Kambani, yaimbomhanya neHemingway. Chimiro chetsika chinoenderana zvizere nemaresitorendi emarudzi ese (kubva kuGreek kuenda kuIndia) nemabhawa akadai seLe Petit Cluny (rue de la Harpe), kana Le Relais de la Huchette, yakanaka piyano bar yekuzorora mumoyo weiyi nharaunda iyo salsa uye reggaeton zvakasanganiswa nemabhuku uye zvepasi rose zvinonhuwira. Kana tikaramba tichienda kumadokero tichasvika kuSaint-Germain-des-Préis, imwe ye nzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzekuzorora muParis (uye zvakare chimwe chinhu chinodhura), kwatinowana nzvimbo dzinozivikanwa senge Café de Flore kana Les Deux Magots.
Iyo yakakurumbira Place de la Bastille iri abuzz nayo Mapikicha ezhizha pamahombekombe eCanal Saint Martin sekuwedzera kwekuzorora neresitorendi kupihwa munzvimbo iyi. Kuva nependi munzvimbo dziri mudare chairo, senge Café des Phares, iyo yekutanga kofi yefafitera muguta, inokurudzirwa, kunyangwe vagari vemunharaunda ino vanozara mushure me8 masikati. Zvirinani kupinda ne iyo rue de la Roquette kudzamara tasvika rue de Lappe, kwatinowana kubva kuma tapas maresitorendi akadai seLa Pirada kuenda ku disco-mabhawa senge inozivikanwa Charlotte Bar kana Havanita, yakarungwa nemhepo isingadzivisike yeCuba.
I «Chueca» yeParis Yakabva pakuva nharaunda yechiJuda kusvika pakuva imwe yenzvimbo "dzakanyanya" muguta guru. MuLe Marais, zvitoro zvine hunyanzvi zviriko zveboho chic muguta zvinosanganiswa nemazariro apo paunogona kuve nemabiko, kuenda kunotamba uye kunyatso tarisa zviratidzwa zviripo. Neichi chikonzero, hazvishamise kuti ngochani dzese dzakatanga kudirana kunzvimbo dzakaita seRed Bar dzakagadzira nzvimbo yevateereri vanowedzera uye vakasiyana-siyana vanoyangarara kumahoro avo ekutamba vhiki rese.
Imwe ye migwagwa yekare kunaParis uye pokutangira kwekare kwekufambira kuenda kuRome, parizvino ine imwe yenzvimbo dzakasiyana-siyana uye dzimwe nzira muguta. Inowanikwa mu5th arrondissement, kusiri kure neLuxembal Palace, rue Moufetard yakazara nehupenyu hweyunivhesiti, mabhawa akadai seiyo Mudzidzi Bhawa anopa macocktails nedoro nemutengo wakanaka, uye nzvimbo dzinoshamisira miriwo dzinofudza mugwagwa uko kurumwa kwakanyanya kupfuura. Au Pétit Grec, chinzvimbo chakakurumbira nekuda kwecreek crepes yakazadzwa nembatatisi, biringanya, feta cheese kana nyama inotonhora isingasvike matatu euros.
Iyo Butte aux Cailles
Mufananidzo naMichaurel kuburikidza neFlickr.
Iri pakati pegumi nematatu negumi nemana ematunhu eParis, kwete kure nenzvimbo inozivikanwa yeChinatown, iri raimbove "zvihuta gomo" nderimwe zvakavanzika zvikuru zveguta guru reFrance. Maitiro ayo akasimba asi asiri epakati akachinja nzvimbo ino kuva inzvimbo yakakwana yekuva nedzimwe doro rakachipa muParis, Nakidzwa nemabiko evamwe ma pub ane bohemia ari echokwadi kupfuura ayo eimwe inozivikanwa butte kubva kuguta, Montmartre, uye nyudza mune yekupihwa kweimwe maresitorendi ayo anopa kubva kazhinji French kana America inoruma kusvika kunyangwe maBasque, senge yakataurwa Chez gladines.
Kana iwe uri kutsvaga kupati muParis, tora mukana we nguva inofadza inopihwa neanenge ese emabhawa emuguta, kudya panzvimbo dzinomira, kuongorora nzvimbo dzisingazivikanwe kana kunakidzwa nemabiko mumahosho ekupinda mahara mamwe emazano ekutevera muguta rine zvakawanda zvekupa kune vese vashanyi vayo. vashanyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Bato muParis: nzvimbo dzakanakisa
Matipi gumi nemashanu ekufamba kuenda kuIndia